ကျန်းမာရေး နဲ့ ဆေးပညာ မေးလိုတာရှိပါကဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အသက်၊ ကျား-မ ပြောပါ။ ဖြစ်နေတဲ့ လက္ခဏာ ၁-၂-၃။ တခုတိုင်းက ဘယ်လောက် ကြာပြီ။ လိုအပ်ရင် ကျန်းမာရေးရာဇဝင်၊ ဓါတ်မှန်၊ (အာလ်ထွာဆောင်း)၊ အိမ်ထောင်၊ ကလေး ရှိ-မရှိ။ နေတဲ့တိုင်းပြည်။ "လူနာမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ အတိအကျ ကိစ္စမရှိပါ။" ဆေးနာမည်ရေးရင် Trade name ကုမ္ပဏီကပေးတဲ့နာမည် သာမက Generic name ဆေးနာမည် ထည့်ရေးပါ။ ဖုန်းဆက်ပြီးမေးရင် Time zone မတူတာရော၊ အသံထွက် လွဲနိုင်တာရောကြောင့် အဆင်မပြေပါ။ Facebook ကနေ မေးတာလဲ ပြန်ရှာရတာမလွယ်လို့ အဆင်မပြေပါ။ drswe01@gmail.com ကို (အီးမေးလ်) ပို့ပါ။ ဆေးပညာစာတွေ ဖတ်လိုပါရင် မာတိကာ အောက်ဆုံးမှာ ရှိပါတယ်။- http://dts-medicaleducation.blogspot.in/ ဆေးပညာစာများ- http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ ဆေးပညာစာများ- http://yamuna-online-clinic.blogspot.in ယမုန်နာ ဆေးခန်း- http://my-sayawun-life.blogspot.in/ ဆရာဝန်ဘဝ အမှတ်ရတာတွေ - http://dts-political-page.blogspot.in/ နိုင်ငံရေး စာမျက်နှာ- http://yamunaclinic.org/ ယမုန်နာ ဆေးခန်း- http://facebook.com/tint.swe.dr Facebook Tuesday, February 1, 2011
2. Shave Carefully နုတ်ခမ်းမွှေး-မုတ်ဆိတ်မွှေးရိတ်တာ ဂရုစိုက်ပါ။ နုတ်လေမျက်နှာကြမ်းလေဖြစ်မယ်။ shaving cream ကောင်းတာသုံးပါ။ ဝက်ခြံရှိတဲ့နေရာကို ရိတ်ရင် အထူးသတိထားပါ။ 3. Aftershave lotion နုတ်ခမ်းမွှေး-မုတ်ဆိတ်မွှေးရိတ်ပြီးရင် Alcohol based aftershaves မသုံးပါနဲ့။ antiseptic to prevent infection ပိုးသေစေတာ၊ moisturizer အစိုဓါတ် ပေးတာနဲ့ fragrance မွှေးကြိုင်တာပါစေရမယ်။ 4. Use Sunscreen သုံးပါ။ SPF factor of 15 ဆိုရင် လုံလောက်ပါတယ်။
5. Use Moisturizer သုံးပါ။ 6. Tone your skin glycolic ဒါမှမဟုတ် alpha hydroxy acids ပါတာကောင်းတယ်။
8. Exercise ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ၁-၂-၂ဝ၁၁